Momba anay | SJZ CHEM-PHARM CO., LTD
SJZ CHEM-PHARM CO., LTD. dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpanondrana lehibe miaraka amin'ny Additives ara-tsakafo, Simika indostrialy ary mpanelanelana amin'ny fanafody. Nahazo ny taratasy fanamarinana ny rafitra kalitao ISO9001 izahay. Ny biraon'ny fanondranana anay dia ao Shijiazhuang, renivohitry ny faritanin'i Hebei, 270km atsimon'i Beijing ihany.
Nandritra ny taona nitomboana, tamin'ny fanombohana tamin'ny varotra iraisam-pirenena madio, SJZ CHEM-PHARM CO., LTD.nanangana indostria ary nanangana tsipika miandalana avy amin'ny fividianana akora ka hatramin'ny fanodinana hatramin'ny fanondranana. Amin'ny maha orinasa vondrona indostrialy multifunction,SJZ CHEM-PHARM CO., LTD. dia nanana orinasa miisa telo mpamokatra mivantana mivantana sy orinasa dimy avy amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fandrakofana FOANA ADDITIVES, INORGANIC ary ORGANIC CHEMICALS.
Ny orinasanay dia mifikitra hatrany amin'ny trosa ary mihevitra ny trosa ho votoatin'ny tenany, izay mitaona ny orinasa ho iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra mitombo haingana any CHINA. Araka izany ny mpanjifanay, na inona na inona avy any an-trano sy any ivelany dia miresaka momba antsika tokoa, ary izany no fananana tsy hita maso an'ny orinasa. Miroso mankany amin'ny tanjona ambony kokoa ny orinasanay ankehitriny ary tongasoa anao hiaraka aminay. Ny fisafidianana anay dia midika hoe misafidy namana tsy mahitsy ianao, fa mpiara-miasa azo antoka ihany koa.
Nanomboka tamin'ny 2015.03.11, SJZ CHEM-PHARM CO., LTD. nanjary orinasa tompon-tany mifehy tanteraka ny HEBEI CHENBANG INTL TRADING GROUP CO., LTD. izay afaka manitatra orinasa ary manolotra serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifa miaraka amin'ny fanohanana matanjaka avy amin'ny governemanta ary vola be avy amin'ny tompon-trosa.